नेपालमाथि नाकाबन्दीका मुख्य योजनाकार जयशंकर मोदी सरकारमा मन्त्री (को-को बने मन्त्री ?) - Nepal's Digital News Paper
नेपालमाथि नाकाबन्दीका मुख्य योजनाकार जयशंकर मोदी सरकारमा मन्त्री (को-को बने मन्त्री ?)
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, जेष्ठ १७, २०७६
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएका छन् । छिमेकी देशका राष्ट प्रमुखलाई बोलाएर राष्टपतिबाट मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएका हुन् ।
मोदीसँग ५७ मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । सपथ लिनेमा ४० प्रतिशत नयाँ अनुहार छन् भने मोदीको पहिलो कार्यकालमा सफल मन्त्रीरहेका अरुण जेट्ली र सुष्मा स्वराज मन्त्रीमा सपथ लिएका छैनन् । भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाह र पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले सपथ लिएका छन् ।
मोदीको मन्त्रीपरिषदमा २४ क्याविनेट, ३३ राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका छन् । मोदीपछि वरियतामा राजनाथ परेका छन् भने तेस्रो पोजिशनमा अमित शाह परेका छन् । मोदीले पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरलाई मन्त्री बनाएका छन् । सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री हुँदा उनी विदेश सचिव थिएँ । जयशंकरलाई नै विदेशमन्त्री बनाउने तयारी मोदीले गरेका छन् ।
जयशंकर नेपालप्रति कडारुप लिने ब्यक्तिका रुपमा मानिन्छन् । नेपालको संविधान जारी गर्न बेला उनी एकाएक नेपाल आएर रोक्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न उनले दवाव दिएका थिए । तत्कालिन विदेश सचिव एस जयशंकरले जति दवाव दिएपनि नेपालमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएपछि उनकै योजनामा नेपालीमाथी भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो ।
यी हुन् मोदी सरकारका ५७ मन्त्री
नरेन्द्र मोदी (प्रधानमन्त्री )
राजनाथ सिंह (लखनऊ उत्तर प्रदेश)
अमित शाह ( गांधी नगर गुजरात)
नितिन गडकरी ( नागपुर महाराष्ट्र)
डीवी सदानंद गौड़ा ( बेंगलुरु उत्तर कर्नाटक)
निर्मला सीतारमण ( राज्यसभा सदस्य)
नरेंद्र सिंह तोमर ( मुरैना मध्य प्रदेश)
रविशंकर प्रसाद ( पटना बिहार)
हरसिमरत कौर बादल (पंजाब)
थावरचंद गहलोत ( राज्यसभा सदस्य)
एस जयशंकर (पूर्व विदेश सचिव)
रमेश पोखरियाल निशंक ( उत्तराखंड)
अर्जुन मुंडा खूंटी (झारखंड )
स्मृति ईरानी ( अमेठी उत्तर प्रदेश )
हर्षवर्धन ( दिल्ली)
प्रकाश जावड़ेकर ( राज्यसभा सदस्य)
पीयूष गोयल ( राज्यसभा सदस्य)
धर्मेंद्र प्रधान ( राज्यसभा सदस्य)
मुख्तार अब्बास नकवी ( राज्यसभा सदस्य)
प्रहलाद जोशी (कर्नाटक)
महेंद्रनाथ पांडेय (उत्तर प्रदेश)
अरविंद सावंत (महाराष्ट्र)
गिरिराज सिंह (बिहार)
गजेंद्र सिंह शेखावत (राजस्थान)
रेणुका सिंह सरुता
जुम्ला लुमगाउँमा वडाध्यक्ष कुटिए, प्रहरी लखेटिए
देशभरका चिकित्सकलाई औषधी ब्यवस्था विभागको एउटा जरुरी सूचना
बाढीमा प्रहरीको भूमिका सेल्फीमै सीमित
तीन तहकै शिक्षकहरुको बढुवा (को-को बढुवा भए ? नामावलीसहित)
धनगढी विस्फोटका एक घाइतेको मृत्यु, प्रहरी र विप्लव नेकपाबीच आरोप प्रत्यारोप
लोकसेवाकाे वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक, के काे विज्ञापन कहिले ?(सूचीसहित)
‘निराेगी भएरै मोटाउनका लागि पनि याेग नै चाहिन्छ’
माधव नेपालको पोजिशन स्पष्टः ओलीले प्रधानमन्त्री, प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नु पर्छ
दुई अध्यक्षको टकरावमा नेपालको पोलिसन स्पष्टःओलीले प्रधानमन्त्री, प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नु पर्छ
अब चन्दा नलिने नेकपा अनेरास्ववियुको घोषणा, लेवीबाट संगठन चलाउने